Okokufundisa Nama-Manuwali we-iPhone | Izindaba ze-IPhone (Ikhasi 5)
Ungawafaka kanjani amafayela wevidiyo ku-iPad
Sichaza ukuthi ungangeza kanjani amavidiyo ku-iPad naku-iPhone nge-iTunes ngezinyathelo ezimbalwa ezilula.
Ungayifaka kanjani i-iOS 8.4 Beta Yomphakathi 2
Njengoba senzile nge-iOS 8.3, sizokwenza isifundo esincane ukuze wonke umuntu ofuna ukwenza kalula futhi asheshe afake i-iOS 8.4.
Ungayisebenzisa kanjani i-Facebook Messenger ku-Mac yakho kusuka kuhlelo lokusebenza lweMilayezo
Kumhlahlandlela olandelayo sizokukhombisa ukuthi ungaxoxa kanjani noxhumana nabo be-Facebook Messenger kusuka kuhlelo lokusebenza lomdabu lwe-Mac
Indlela Dlulisa iTunes Library kwenye Computer
Kumhlahlandlela olandelayo sizokukhombisa ukuthi ungawudlulisa kanjani umtapo wezincwadi wakho we-iTunes kusuka kwenye ikhompyutha uye kuwo ukuze uhlale uhlelekile futhi uvuselelwa
Ungayivuselela kanjani inguqulo yami ye-iPad
Sichaza umehluko phakathi kokubuyisela nokuvuselela, kanye nenqubo yakho kokubili nokuthi kufanele ukhethe nini noma okunye.
Ungazisusa kanjani izingoma / ama-albhamu kusuka ku-iPhone ngaphandle kwe-iTunes
Uma sifuna ukususa ama-albhamu noma izingoma ngaphandle kwe-iPhone yethu, singakwenza ngokugwema ukusebenzisa i-iTunes. Sikukhombisa ukuthi ukwenze kanjani.
Ungayisetha kanjani ingoma engiyithandayo njengomsindo we-alamu ku-iPhone
Kulesi siqondisi esincane sikukhombisa izinyathelo zokumisa ingoma njengomsindo wama-alamu wakho we-iPhone / iPod noma i-iPad.
Ungayidlulisa kanjani ilabhulali yakho ye-iTunes kwenye ikhompyutha
I-OS sichaza ukuthi singayikopisha kanjani umtapo wezincwadi we-iTunes ukwenza ikhophi eyisipele noma ukuyithumela kwenye ikhompyutha
Ungayenza kanjani ngokwezifiso imininingwane eboniswe ku-Apple Watch
I-Apple Watch, njengoba wazi, iyithuluzi lakamuva lokufika emndenini wakwa-Apple. Uqale ukufinyelela kweyakhe ...
Ungazithola kanjani futhi uzifake ku-Apple Watch
Lapho sithola idivayisi entsha, njenge-Apple Watch, into yokuqala esizoyenza, ngokunengqondo, ukuzinikeza thina ...
USiri angakusiza futhi sikukhombise ukuthi kanjani
Sikukhombisa kuvidiyo ezinye izibonelo zolwazi uSiri angasikhombisa lona ngokukhulu ukushesha nangokushesha, ngaphandle kokuvula ngisho idivayisi
Ungawudlulisa kanjani umculo ku-Apple Watch
Uma sigijima, siqeqesha indawo yokuzivocavoca noma senza uhlobo oluthile lomsebenzi, singezwa umculo ogcinwe ...
Ungangeza kanjani abangani ku-Apple Watch
I-Apple Watch isivumela ukuthi silungiselele oxhumana nabo abavame kakhulu nababalulekile njengo "Abangane" ukuze sikwazi ukufinyelela kubo ...
Ungaziphatha kanjani izipele nge-iTunes
Sichaza kuvidiyo ukuthi ungadala kanjani futhi ubuyisele izipele ze-iPhone yakho ne-iPad usebenzisa i-iTunes.
Ungayiqala kanjani kabusha i-Apple Watch
Njengoba nazi nonke, i-Apple Watch iqale ukufinyelela kumakhasimende okuqala ngoLwesihlanu olwedlule, ngo-Ephreli 24 no ...
Ungasetha kanjani izaziso ku-Apple Watch
Njengoba nonke nazi, omunye wemisebenzi esemqoka ye-Apple Watch ukusivimbela ekukhipheni i-iPhone ephaketheni lethu ...
Ungazifaka kanjani izinhlelo zokusebenza usebenzisa i-iTunes
Sikukhombisa ukuthi ungazifaka kanjani, uzikhiphe kanjani futhi uzidlulisele izinhlelo zokusebenza zisebenzise ikhompyutha yakho usebenzisa i-iTunes, kufaka phakathi okokufundisa ngevidiyo okuchaza inqubo
Ungayisebenzisa kanjani iSiri ku-Apple Watch
Njengoba i-Apple Watch yokuqala isivele ifinyelele kubanikazi bayo, saqala izifundo zayo eziyindilinga. Kulokhu okuthunyelwe sikukhombisa ukuthi uyisebenzisa kanjani iSiri
Faka i-MovieBox ku-iPhone yakho nge-iOS 8.3 nangaphandle kwe-jailbreak
Kulesi siqondisi sizokufundisa ukuthi ungayifaka kanjani i-MovieBox ku-iPhone yakho ngaphandle kwe-jailbreak kanye nenguqulo yakamuva yohlelo lokusebenza lwe-Apple, i-iOS 8.3
Ungazifihla kanjani izinhlelo zokusebenza ezithengiwe ku-iOS 8
Ngale ndlela singakwazi ukufihla izinhlelo zokusebenza ezazithengwe ngaphambilini ku-App Store ukuthi ngasizathu simbe asifuni ukukhombisa esigabeni sokuthenga.
Yenza kusebenze izinhlelo zokusebenza ezingenayo i-password ye-iOS 8.3
Yenza kusebenze umsebenzi wokungaceli iphasiwedi uma uthola izinhlelo zokusebenza zamahhala ku-App Store ukuze uzuze lula nesivinini.
Ungenza kanjani isipele se-iPhone
Kulesi sifundo sizokufundisa ukuthi ungasenza kanjani isipele se-iPhone yakho ngazo zombili i-iTunes ne-iCloud ukuze ungalahlekelwa yilutho.
Ungayicisha kanjani i-log yomsebenzi ku-iPhone
Funda ukuthi ungayenza kanjani ingasebenzi ilog yomsebenzi ku-iPhone bese umisa iselula ye-Apple ukuthi ingalinganisi izinyathelo zethu zokonga ibhethri.
Ungayisebenzisa kanjani i-iTunes nge-iPhone ne-iPad yethu: izinyathelo zokuqala
Ingxenye yokuqala yomhlahlandlela wokuthi ungayisebenzisa kanjani i-iTunes nge-iPhone ne-iPad yethu lapho senza ukuxhumana kuqala nohlelo
Okufanele ukwenze uma ngilahlekelwa i-iPhone yami?
Sikulethela umhlahlandlela ophelele walokho okufanele sikwenze uma kwenzeka ulahlekelwe noma webiwe i-iPhone yethu.
Ungayifaka kanjani iWindows 95/98 ku-iPad
Ngenxa yeJailbreak singenza izinto obekungenakwenzeka. Namuhla sikukhombisa okokufundisa ukufaka iWindows 95/98 ku-iPad yethu
Ungayenza kanjani isinqamuleli sekhasi lewebhu ku-iPhone
Umhlahlandlela wokwenza isinqamuleli sesithonjana ekhasini lewebhu esikrinini sasekhaya noma esikhungweni sezaziso se-iPhone noma i-iPad ene-iOS.
Ungasifaka kanjani isikhathi sePopcorn ngaphandle kweJailbreak
Manje sesingafaka iPopcorn Time, i-pirated Netflix kumadivayisi we-iOS ngaphandle kwesidingo seJailbreak. Sikukhombisa ukuthi kanjani.
Ungasusa futhi ubuyise kanjani izithombe namavidiyo kusuka ku-Cloud.com
Uma, nganoma yisiphi isizathu, sifuna ukususa noma ukuthola kabusha izithombe namavidiyo, singakwenza ngesiphequluli esivela ku-ICloud.com ngale ncwajana elula.
Ungawasusa kanjani amakhadi esikweletu agcinwe ku-Apple Pay
Izinyathelo zokususa ikhadi lesikweletu elihlotshaniswa ne-Apple Pay
Ungayithuthukisa kanjani inethiwekhi yakho ye-WiFi ekhaya
Sichaza ukuthi singakuthuthukisa kanjani ukuxhumana kwe-Wi-Fi kwamadivayisi wethu ngokwenza izinguquko ezincane kumzila wethu
Ungayikhulula kanjani indawo ku-iCloud
Kumele sisebenzise kakhulu isikhala ku-iCloud futhi ngalezi zinyathelo ezilula uzokwazi ukuthi usikhulula kanjani isikhala ku-iCloud.
Faka futhi ubuke izingoma ezingomeni ze-iTunes
Ngeza izingoma zomculo ezivela ku-iTunes futhi uzibuke ngokushesha usebenzisa lezi zinhlelo zokusebenza ezimbili okulula ukuzisebenzisa.
Uyisebenzisa kanjani ikhamera ye-iPad
Ikhamera ye-iPad, njengezicelo eziningi, kulula kakhulu ukuyisebenzisa.
Ungaxhuma kanjani i-iPad ku-TV
Sinezinketho eziningana zokuxhuma i-iPad kuthelevishini yethu: kusuka kuzinhlelo zokusebenza zamahhala kumadivayisi
Ungasenza kanjani ngokwezifiso isizinda sesikrini se-iPad
Ukushintsha isithombe sangemuva se-iPad yethu inqubo elula kakhulu. Nakhu ukuthi ungakwenza kanjani ngokushesha.
Ungakhubaza kanjani umqondisi ku-iPad
Ukukhubaza ukulungisa okuzenzakalelayo kombhalo okujabulisayo ku-iPad yethu nge-iOS 8 kulula kakhulu. Lapha sikukhombisa ukuthi ungakwenza kanjani.
Ungayifaka kanjani iphasiwedi ene-alphanumeric ku-iPad yethu
Sikufundisa ukuthi ungayilungisa kanjani i-alphanumeric password ukuvula i-iPad yakho nganoma iyiphi i-iOS etholakalayo njengamanje
Ungayiqopha kanjani i-iPhone Screen nge-OS X Yosemite
Ngenxa ye-iOS 8 ne-Yosemite singarekhoda isikrini se-iPhone noma i-iPad ngaphandle kokusebenzisa izinhlelo ezivela eceleni.
Amaqhinga we-iOS 8 (IV): rekhoda isikrini se-iPhone yakho ne-iPad
Sichaza ukuthi ungarekhoda kanjani isikrini se-iPhone yakho noma i-iPad nge-Mac ngaphandle kwesidingo sezinhlelo zokusebenza zangaphandle.
Faka i-iOS 8.3 kudivayisi yakho ngaphandle kwe-USA
Namuhla ku-Actualidad iPhone sikukhombisa ukuthi ungayifaka kanjani i-beta yomphakathi ye-iOS 8.3 ku-iPhone yakho ngaphandle kokuvela e-United States
Vula uhlelo lokusebenza lomsebenzi we-Apple Watch ku-iPhone yakho ngaphandle kwe-Jailbreak
Sikukhombisa ukuthi ungaluvula kanjani uhlelo lokusebenza lomsebenzi we-Apple Watch ku-iPhone yakho nge-iOS 8.2.
Izilawuli eziyi-15 zokuthola okuningi ku-Apple TV yakho
Sikwethulela ukuhlanganiswa okhiye noma izilawuli eziyishumi nanhlanu ukuze uthole okuningi ku-Apple TV yakho
Umnikazi nenkosi yokuxhumana nabantu
Ukuhlanganiswa kwama-tweaks okusindisa izithombe kusuka ku-Snapchat, Instagram, Amavidiyo avela ku-Facebook, nokunye ukukhubaza isheke eliluhlaza okwesibhakabhaka le-WhatsApp nokuningi.
Nika amandla kabusha i-2G ku-iOS 8.1
Ngalesi sifundo sizokwazi ukunika amandla kabusha inketho ye-2G iMovistar, Yoigo, Orange neVodafone block.
Ukukopela kwe-iOS 8 (II): Ungaphazamisi
Sikukhombisa ukuthi ungayilungisa kanjani inketho ye-iOS engaphazamisi ukugwema izaziso ezicasulayo phakathi nobusuku
Ungakwehlisa kanjani kusuka ku-iOS 8.2 kuye ku-iOS 8.1.3
Ku-iPhone ye-Actualidad sikusiza ukuthi wehlise ukusuka ku-iOS 8.2 kuye ku-iOS 8.1.3.
Indlela entsha yokwakha amafolda ahlanganisiwe ku-iOS 8
Indlela entsha yokwakha amafolda afakwe ku-iOS abanye abasebenzisi angathola kulula kunangaphambilini.
Ungawashintsha kanjani amathegi we-Shazam abe uhlu lwe-Spotify noma i-Rdio
Yenza izingoma ozifunayo ku-Shazam zitholakale ngokushesha ku-Spotify noma i-Rdio ngohlu lwadlalwayo.
Amaqhinga we-iOS 8 (I): khulula isikhala se-iCloud
Amathiphu wokuphatha kangcono isikhala se-iCloud nokukhulula isikhala
Ungakuthola kanjani okuningi kuwashi lakho le-Pebble
Sikukhombisa ukuthi ungazuza kanjani ngePebble Smartwatch yakho ku-iOS ngenxa ye-jailbreak kuvidiyo emfushane engaphansi kwemizuzu eyi-10.
Ungasisebenzisa kanjani isilawuli sakho se-PS3 ku-iPhone yakho
Sikukhombisa ukuthi ungasisebenzisa kanjani kahle isilawuli sakho se-PS3 ukudlala i-iPhone yakho sibonga lesi siqeshana neCydia.
Lungisa "Ayikwazi ukuthola umshayeli we-Apple" ku-TaiG ye-Windows
Abasebenzisi abaningi bahlangabezane nomyalezo ojabulisayo "Awutholi umshayeli we-Apple, sicela ulande bese ufaka i-iTunes" ngalesi sifundo esisixazulula.
Izimfihlo eziyi-12 ezifihlwe kuma-EarPods nanoma iyiphi enye ihedisethi ye-iPhone ehambisanayo
Thola izici ezi-12 ezifihliwe zama-EarPods ahambisana ne-iPhone ne-iPad namahedfoni akuvumela ukuthi usebenzise ikhamera, biza uSiri nokuningi.
Ithiphu: ukudlala umculo noma ividiyo ngemuva kwesikhathi esithile
Qondisa ukumisa ukudlala umculo noma ividiyo nge-othomathikhi ku-iPhone yakho noma kwi-iPad ngesibali sikhathi esilungisekayo nesikhathi osifunayo.
Ungawumisa kanjani umculo ku-iPad yakho ngohlelo lokusebenza lwe-Clock
Ngokusebenzisa i-timer etholakala kuhlelo lokusebenza lwe-iOS Clock singalungiselela ukuthi umculo odlalayo ume ngesikhathi esithile
Isibonisi: Yonke ividiyo nomsindo ovela kwi-iPad yakho kukhompyutha yakho (i-PC ne-Mac)
Lolu hlelo oluhle kakhulu lusivumela ukuthi sibonise yonke ividiyo nomsindo kusuka ku-iPad yakho kukhompyutha, ngesikhathi sangempela.
Izindlela ezimbili zokonga izithombe ze-Instagram esondweni
Ngalezi zindlela ezimbili singagcina izithombe ze-Instagram ku-reel photo reel ngqo.
I-PhoneExpander, uhlelo lokusebenza lokukhulula isikhala ku-iPhone yakho (OS X)
Khulula imemori ku-iPhoone yakho nge-PhoneExpander, uhlelo lokusebenza olukuvumela ukuthi usule ama-cache, izinhlelo zokusebenza, izithombe, amavidiyo, nomculo.
I-PhoneExpander ikusiza ukukhulula isikhala ku-iPad yakho noma i-iPhone
I-PhoneExpander ikusiza ukukhulula isikhala ku-iPad yakho noma i-iPhone ngokususa amafayela angenamsoco.
Umhlahlandlela wokugcina wokusebenzisa i-Apple Pay
Uma ufuna ukwazi kabanzi mayelana nokuthi uyisebenzisa kanjani i-Apple Pay, kuphi futhi nini, namuhla sikulethela umhlahlandlela ocacile wokuthola okuningi kukho.
Ungakwehlisela kanjani ku-iOS 8.1.2 ukuze ukwazi ukuJailbreak
Isengazehliselwa ku-iOS 8.1.2 uma uthuthukela ku-iOS 8.1.3. Sichaza igxathu negxathu ukuthi singakwenza kanjani
Unganciphisa kanjani i-iOS 8.1.3 iye ku-8.1.2
Ngokubuyekezwa kwakamuva kwe-iOS, i-Apple ivala iminyango ye-jailbreak, kulesi sifundo sikufundisa ukuthi wehlele ku-iOS 8.1.2.
Indlela Yokuthekelisa Oxhumana Nabo Ilondolozwe ku-iCloud
Funda ukuthi ungathumela kanjani oxhumana nabo abalondolozwe ku-iPhone yakho noma i-iPad ngefomethi ye-vCard kusuka kuphaneli yeICloud.com
Indlela engcono yokusetha i-Gmail ye-iOS
Sikulethela okokufundisa ukukusiza ukusetha i-akhawunti yakho ye-Gmail kuhlelo lokusebenza lwe-Imeyili ngendlela efanele.
Manje usungakwazi ukusebenzisa i-jailbreak iOS 8.1.2 kusuka ku-Mac yakho, sichaza ukuthi kanjani
Umhlahlandlela wokuqhekeka kwejele noma yiluphi uhlobo lwe-iOS 8 lwe-iPhone ne-iPad oluvela kwi-Mac usebenzisa i-PP Jailbreak enokusetshenziswa kwe-TaiG.
Ungayilawula kanjani i-PC yakho noma iMac kusuka ku-iOS nge-Google Remote Desktop
Izindaba ze-iPad zikulethela okokufundisa ukulawula ikhompyutha yakho kusuka ku-iOS nge-Chrome Remote Desktop.
Dala ukuncenceza kwakho nezaziso ngeGarageband
Uhlelo lokusebenza lokudala umculo lwe-Apple "iGarageband" lisivumela ukuthi sizenzele ukuncenceza okwenziwe ngokwezifiso.
Ungawasesha kanjani amagama ngeSafari ngaphakathi kwekhasi
ISafari inomsebenzi ocashile ku-iOS 8: sesha amagama ngaphakathi kwekhasi ngaphandle kokuwushiya, kunjalo
Ukulinganiselwa kohlelo lokusebenza lwendabuko 'Amavidiyo' we-iOS
Uhlelo lokusebenza lwendabuko lwe-iOS olusivumela ukuthi sibuke amavidiyo lukhawulela kakhulu umuzwa womsebenzisi futhi yingakho kufanele sifune ezinye izindlela
Ungasisebenzisa kanjani isici seHandoff kuma-Mac amadala ngaphandle kwe-Bluetooth 4.0
Sikukhombisa ukuthi ungaxazulula kanjani izinkinga zokusebenza ze-Handoff kumakhompyutha amadala we-Mac nge-bluetooth 2.0
Ungazilungisa kanjani izinkinga ze-Wifi ku-iOS 8- iOS 8.1.2
Uhlu lwezixazululo ezingaba khona zezinkinga ze-Wifi ku-iOS 8
I-Apple kufanele ithuthukise indlela yokususa amakhadi ku-Passbook
Umhlahlandlela wokususa amakhadi, amathikithi noma amathikithi ku-Passbook kusuka ku-iOS 8 ngokushesha okukhulu
Ungayilawula kanjani i-iPad ngeVeency (Cydia)
I-Veency tweak isivumela ukuthi silawule i-iPad yethu kwi-Mac yethu, i-Windows PC noma i-Linux.
Lungisa inkinga Ayikwazi ukuxhuma ku-App Store
Sikukhombisa ukuthi ungayixazulula kanjani inkinga yokuxhuma kwe-iPad yethu noma i-iPhone nge-App Store
I-Safari ihamba kancane? Leli qhinga lizothuthukisa ukusebenza kwakho
Thuthukisa ukusebenza kweSafari ku-iPhone noma i-iPad ngobuqili obuzothuthukisa isivinini sokulayisha samakhasi ewebhu owavakashela kakhulu.
Ungayisebenzisa kanjani i-Jailbreak TaiG kusuka ku-Mac ngeWindows Virtual Machine
Ungayisebenzisa kanjani i-Jailbreak TaiG ku-Mac usebenzisa iWindows Virtual Machine. Kuchazwe nje ngezithombe.
Ngeza kalula iphrinta ye-WiFi kunethiwekhi yakho ngenxa ye-WPS
Ukungeza iphrinta kunethiwekhi yakho yesikhumulo sezindiza ngenxa yomsebenzi we-WPS kulula kakhulu futhi sizochaza ngesinyathelo ngesinyathelo.
Ungayisebenzisa kanjani i-WhatsApp kwi-Windows PC noma kwi-Mac
Umhlahlandlela wokuqalisa i-WhatsApp kusuka kukhompyutha ye-Windows noma ye-Mac, phendula imiyalezo ye-WhatsApp evela ku-PC noma kwi-Mac ngalesi sifundo.
Guqula noma yisiphi isithombe sibe yi-vector usebenzisa i-Adobe Shape
I-Adobe Shape wuhlelo lokusebenza olukuvumela ukuthi wenze ama-vector designs kusuka kukhamera. Ukwazi ukwenza izithombe ze-vector zento ethathiwe.
Tricks ukushaja ibhethri le-iPhone ngokushesha
Uyishaja kanjani i-iPhone ngokushesha ngamasu athile azokwenza ukuthi ishaja yakho yebhethri yeselula esikhathini esincane
Faka i-iOS 8.1 ku-Jailbreak Ngenkathi Usakwazi
U-Apple ukhiphe i-iOS 8.1.1 kepha i-iOS 8.1 isengafakwa. Sichaza ngokuningiliziwe ukuthi singakwenza kanjani.
Xazulula inkinga ye-AirDrop ku-iOS 8 naku-Yosemite
Ingabe i-AirDrop ayisebenzi futhi kufanele ngoba amadivayisi wakho ayahambisana? Lesi sixazululo singakusiza.
Faka i-WhatsApp Beta kalula ngenxa yeJailbreak
Ukufaka i-WhatsApp Beta elungiselelwe ama-iPhones amasha kulula kakhulu ngenxa yeJailbreak
Ungayilawula kanjani i-Spotify kwikhompyutha yakho kusuka ku-iPhone
Okokufundisa ukulawula i-Spotify ye-Mac noma i-PC kusuka ku-iPhone, i-iPad noma idivayisi ye-Android, ukuze ukwazi ukushintsha izingoma ukude.
Ungayivimba kanjani imilayezo yakho yomsindo nevidiyo ekunyamalaleni ku-iMessage iOS 8
Enye yezinto ezintsha eza ne-iOS 8 ukususwa kokuzenzakalelayo kwemilayezo yomsindo neyevidiyo etholwe ku-iMessage. Namuhla sikukhombisa ukuthi ungayiguqula kanjani.
Dlulisa amafayela kalula ku-iPhone yakho nge-iFile (Cydia)
iFile iyi-explorer yefayela enamandla esivumela ukuthi sidlulisele amafayela siye noma sisuse i-iPhone ne-iPad yethu ngaphandle kwesidingo sezintambo.
Hlanganisa i-akhawunti yakho ye-Cydia nedivayisi yakho entsha
Ukuhlobanisa i-akhawunti yethu ye-Cydia nedivayisi yethu entsha kusivumela ukuthi sibuyise konke ukuthenga kwethu.
Ungayithola kanjani i-iPhone emanzi
Bakhuluma ngokuthi ungayithola kanjani i-iPhone yethu emanzi, ngemuva kokumanzi oketshezi. Ikhithi eyodwa ichaziwe, kepha ezinye ziyaxoxwa.
Ungayisebenzisa kanjani i-AirDrop ukwaba amafayela
Isifundo sokufunda ukuthi ungayisebenzisa kanjani i-AirDrop ukwabelana ngamafayela phakathi kwamadivayisi we-Apple, nge-iOS noma nge-Mac OS X. Siyichaza igxathu negxathu
Ungayibamba kanjani i-jailbreak idivayisi yakho nge-Pangu8
IPangu8 ibuyekezelwe enguqulweni 1.1.0 futhi isivumela ukuthi sifake i-Cydia ngokuzenzakalela kudivayisi yethu kusukela ngaphambi kokuthi sikwenze ngesandla
Isinyathelo-nge-sinyathelo vimbela i-iCloud ukuthi izigcine ngokuzenzakalela izithombe zakho
Isifundo sokwazi ukuthi ungakugwema kanjani ngokuqinisekile ukuba nezithombe ku-iCloud. Sikutshela zonke izindlela zokuvumelanisa okufanele zingasebenzi
Lungisa izinkinga nge-Instant Hotspot ku-iOS 8 naku-OS X Yosemite
I-Instant Hotspot ikuvumela ukuthi usebenzise ukuxhumeka kwedatha kwe-iPhone yakho noma i-iPad kwi-Mac yakho. Sichaza ukuthi ungayithola kanjani.
Ungaludlulisa kanjani ulwazi kusuka ku-iPad yethu endala uye kolusha
Uma emasontweni ambalwa ezayo ungomunye wabasebenzisi abake bacabanga ukuvuselela i-iPad yabo "yakudala" ngomunye we ...
Ungazenza kanjani izingcingo kusuka ku-iPad
Nge-iOS 8 manje sesikwazi ukushaya izingcingo kusuka ku-iPad yethu ngaphandle kokuthinta i-iPhone. Sikukhombisa ukuthi kanjani.
I-Jailbreak bese ufaka i-Cydia ku-iOS 8 igxathu negxathu
Sichaza ukuthi singayenza kanjani i-JAilbreak nePangu bese sifaka uLydia ngesandla
Ungayisetha kanjani i-Handoff ku-iOS naku-Yosemite
Lezi yizinyathelo okufanele uzilandele ukulungisa kahle lesi sici sokuqhubeka ku-iPhone yakho, i-iPad, ne-Mac.
Isixazululo sezinkinga zokwenza kusebenze kwe-SMS ku-Mac
Uma ikhodi yokusebenza ye-SMS ingaveli ku-Mac yakho, sizokutshela isixazululo
Uhlu lwamabhange nezikhungo ezihambisana ne-Apple Pay
Uhlu lwezikhungo, amabhange namakhadi wesikweletu nawasebhange ahambisana nohlelo lokukhokha lwe-Apple Pay
Ungayisebenzisa kanjani imiyalezo evela kwi-Mac yakho
Uhlu lwezinyathelo zokukwazi ukuthumela nokwamukela imiyalezo ejwayelekile evela ku-Mac
Ukuze ushintshe i-ID ye-Apple yedivayisi yethu, okokuqala kufanele sisuse i-akhawunti ye-iCloud yedivayisi yethu. Sikukhombisa izinyathelo okufanele uzilandele.
Ungasisebenzisa kanjani isibali sikhathi sekhamera ku-iPad naku-iPhone
Umsebenzi omusha wesibali sikhathi wekhamera usivumela ukusetha isikhathi esisidingayo ukuze sikwazi ukuvela esithombeni lapho sifuna ukuvela khona.
Londoloza ibhethri ku-iPhone ngokwenza i-grayscale ku-iOS 8
Yize imodi yokumpunga ingazange yathuthukiswa ukuze isindise impilo yebhethri futhi ingahlala icasula njalo, ingaxhashazwa ngalokho.
Ungasusa Kanjani kude i-Open Safari Tabs
Ngenxa yokuvumelanisa nge-iCloud ungavala amathebhu we-Safari wanoma iyiphi idivayisi kusuka ku-iPhone yakho noma i-iPad
Ungayilungisa kanjani i-iTunes WiFi syncing nge-iOS 8
Ngemuva kokubuyekeza ku-iOS 8, abanye abasebenzisi babike izinkinga ngokuvumelanisa kwe-WiFi phakathi kwe-iTunes ne-iPhone. Lapha siphakamisa izindlela zokuyixazulula.
Ungawufinyelela kanjani umlando wokusesha we-iPhone kusuka ku-iPad
Enye yezinto ezintsha ze-iOS 8 kungenzeka ukuthatha nomlando we-iPhone ne-iPad, kepha kufike eyodwa kuphela yamadivayisi amabili.
Ungangeza kanjani, ukhiphe futhi ushintshe ukuhleleka kwamawijethi ku-iOS 8
Izindaba ezinkulu ku-iOS 8 kwaba ukufika kwamawijethi. Kulokhu, sifuna ukukukhombisa okumele ukwenze ukwengeza, ukususa nokushintsha ukuhleleka kwalokhu
Ungazifihla kanjani iziphakamiso zamagama kukhibhodi ye-iOS 8
Yize abasebenzisi abaningi bakuthola kuwusizo ngempela, abanye bakuthola kucasula. Namuhla sikufundisa ukuthi ungazifihla kanjani iziphakamiso zamagama kukhibhodi ye-iOS 8.
Ungasifaka kanjani isikhathi sePopcorn ngaphandle kwejele
Bathole isisombululo sokufaka i-Popcorn Time kumadivayisi ngaphandle kwe-jailbreak besebenzisa ubungozi obusetshenziswa futhi ngama-emulators
Ungasakaza kanjani ama-movie mahhala ku-iPhone nge-MovieBox
I-PopCorn yaba isemthethweni ye-iOS esimweni samadivayisi we-jailbroken, futhi namuhla sikhuluma ngokuthi ungawabuka kanjani ama-movie wamahhala ku-iPhone ngaphandle kokuvula nge-MovieBox.
Ungazifihla kanjani izinhlelo zokusebenza ezithengiwe ku-iOS 8 (App Store)
Ngenxa ye-iOS 8 singakwazi ukufihla izinhlelo zokusebenza ezithengwe ku-App Store, okusho ukuthi, susa lezo zinhlelo zokusebenza esigabeni esithi: "Okuthengiwe"
I-Moviebox, uhlelo lokusebenza olufana ne-PopCorn Time kepha ngaphandle kwesidingo se-jailbreak
Ngenxa ye-Moviebox singajabulela ukusakaza ama-movie nochungechunge kusuka kudivayisi yethu, kepha akudingekile ukuthi kube nokuqhekeka kwejele
Ungayakha kanjani iphasiwedi ethile ye-iCloud
Uma sifuna ukufinyelela i-iCloud kusuka kuhlelo lokusebenza olungakusekeli ukuqinisekiswa okuyizinyathelo ezimbili, kuzofanele senze iphasiwedi ethile
Nakhu ukuthi izaziso ezisebenzisanayo zisebenza kanjani ku-iOS 8
IOS 8 iletha izaziso ezintsha zokusebenzisana. Sikukhombisa ukuthi isebenza kanjani
Faka izinqamuleli koxhumana nabo be-WhatsApp
Sikukhombisa ukuthi uzakha kanjani izinqamuleli zokuthumela ngokushesha imiyalezo ye-WhatsApp koxhumana naye
Ungayakha kanjani iphrofayili yengane ku-Ukwabelana Komndeni
Lapha sikufundisa ukuthi ungayakhela kanjani i-akhawunti yengane yakho ngaphakathi Ukwabelana Komndeni, ku-iOS 8
Ungayisebenzisa kanjani iCloud Drive
Uma ungafundile ngezinsizakalo zefu ngemuva kwamaphutha edlule njenge-MobileMe, kufanele uzame i-ICloud Drive.
Ungakwehlisa kanjani kusuka ku-iOS 8.0.1 kuye ku-iOS 8.0
Ungawanciphisa kanjani amandla we-iOS 8.0.1 kuye ku-iOS 8 ngezinyathelo ezilula, ngezixhumanisi zokulanda ezifakiwe
Ungazenza kanjani futhi uzamukele izingcingo ezivela ku-iPad yakho nge-iOS 8
Nge-iOS 8, Mac OS X Yosemite, ne-Continuity, ungathola ucingo hhayi ku-iPhone yakho kuphela, kodwa naku-iPad, iPod touch, naku-Mac yakho.
Ungahamba kanjani ukusuka ku-Android uye ku-iOS 8
Ukuya kusuka ku-Android uye ku-iOS akunzima, kuthatha kuphela izinyathelo ezimbalwa ukuze uqiniseke ukuthi unakho konke okuqukethwe okudingayo, ake ngikuqondise.
Ungazilungisa kanjani izinkinga zebhethri ku-iOS 8
Ibhethri lihlala liyinkinga kuzinguqulo ezintsha ze-iOS. Lezi zeluleko zingakusiza ukuthi uthole okuningi kukho.
Likuphi iReel ku-iOS 8?
Ukuphi i-iOS 7 Reel endala? Ungakhathazeki ngokuthi awulahlekelwanga zithombe, sizokutshela ukuthi uhlelo lokusebenza olusha lwezithombe lusebenza kanjani ku-iOS 8
Ungakwehlisa kanjani kusuka ku-iOS 8 kuye ku-iOS 7.1.2
Isifundo esichaza isinyathelo ngesinyathelo ukuthi ungayifaka kanjani i-iOS 7.1.2 futhi ngemuva kokufaka i-iOS 8 kudivayisi yakho
Ungawalungisa kanjani amaphutha we-Instagram ngama-akhawunti we-Twitter ne-Facebook
Ukuvuselelwa kwe-Instagram ne-iOS 8 ukuthi ukushicilelwa ngasikhathi sinye kwamanye amanethiwekhi omphakathi kunikeza iphutha, nansi incazelo emfushane yokuyixazulula.
Ungabasusa kanjani oxhumana nabo bakamuva nabazithandayo kusuka ku-Multitasking ku-iOS 8
Isifundo lapho sikukhombisa khona ukuthi ungasusa kanjani izintandokazi noxhumana nabo bakamuva abakhonjiswayo lapho ufinyelela ukwenza okuningi ku-iOS 8
Ungazixazulula kanjani ngokuqhubeka noma nge-Siri Hands-free
Uma unenkinga yokuthola izingcingo usebenzisa izici zikaSiri ezingenazandla noma ukuqhubeka, zama lesi sixazululo ngaphambi kokuthi uhlanye.
Ungakukhubaza kanjani ukulanda okuzenzakalelayo kwe-iPad yethu
Uma ungafuni ukuthi izinhlelo zakho zokusebenza zedivayisi, umculo nezibuyekezo zikulande ngokuzenzakalela, cisha ukulanda okuzenzakalelayo ku-iPad yakho
Ungabasusa kanjani oxhumana nabo abayimpinda ku-iPad yethu
Ngenxa yohlelo lokusebenza lwe-Smart Merge, singasusa oxhumana nabo abayimpinda kusuka kuhlelo lokusebenza lethu loxhumana nabo be-iOS
Lungiselela i-iPhone yakho ne-iPad ukubuyekeza ku-iOS 8
Sikunikeza izincomo zokuvuselela ku-iOS 8 ngaphandle kwezinkinga
Isiqinisekisi se-Google: Ukuqinisekiswa okuzinyathelo ezimbili kwe-Google
Ngenxa yesiqinisekisi singavikela i-akhawunti yethu yakwa-Google ngokuqinisekisa okuyizinyathelo ezimbili.
Funda ukuthi ungayithola kanjani kabusha iphasiwedi yakho ye-Apple ID futhi ukwazi ukuqhubeka nokufinyelela ku-App Store, iTunes, iCloud, njll.
Ungazithuthukisa kanjani ngokuzenzakalela izithombe nge-iOS
Ngenxa ye-iOS 7 singahlela ngokuzenzakalela izithombe esizifunayo, ngokusebenzisa ithuluzi: "Thuthukisa" olutholakala ngaphakathi kohlelo lokusebenza "Izithombe"
Ungakusula kanjani okuqukethwe nezilungiselelo ku-iPad
Isifundo esincane ukuze ukwazi ukusula konke okuqukethwe nezilungiselelo ze-iPad yethu ngaphambi kokukuthengisa.
Ungakusebenzisa kanjani ukulawulwa kwenkinobho ku-iOS 7
Sizokufundisa ukwenza kusebenze i-Button Control ku-iOS 7 ukulawula i-iOS ngokucindezela esikrinini
Ungayiguqula kanjani iphasiwedi eyimpande ye-iPad yakho eboshiwe
Sikufundisa ukuthi ushintshe iphasiwedi yomsebenzisi omkhulu (impande) ye-iPad yakho ejele nge-terminal yeselula esiyifaka neCydia
Ungazithatha kanjani izithombe ezinhle nge-iPhone yakho
Kunezithombe eziningi esizilayisha ezinkundleni zokuxhumana ezisabekayo impela, futhi akuyona ikhamera kepha iso elithatha isithombe. Thuthukisa izithombe zakho ngamathiphu ambalwa.
Uma sifuna ukususa amafayela nedatha kusuka kuzinhlelo zokusebenza ezikudivayisi yethu, ezithatha isikhala ku-iCloud, kuzofanele siwasuse ku-iDevice yethu
Ungasusa kanjani isikhala esisetshenzisiwe kusuka kuhlelo lokusebenza lweMeyili
Ngenxa ye-iOS singakwazi ukuvula isikhala kudivayisi yethu ngeMeyili ngoba i-cache yayo nama-akhawunti athatha isikhala
Ungasusa kanjani noma ubike ukuphawula ku-Instagram kusuka ku-iPhone
Namuhla ku-Actualidad iPhone sikufundisa ukuthi ungasusa kanjani ukuphawula ku-Instagram kusuka ku-terminal yakho yeselula. Kumele ulandele izinyathelo eziningiliziwe.
Ungasilungisa kanjani isikrini sakho se-iPhone 5s
Ungasishintsha kanjani isikrini se-iPhone 5 yakho ekhaya nangezindleko eziphansi.
Ungazilungisa kanjani izinkinga ze-Wi-Fi ku-iPhone yakho noma ku-iPad
Sikulethela uchungechunge lwamathiphu wokuthi ungaxazulula kanjani inkinga ehlobene ne-Wi-Fi yamadivayisi we-iOS.
Ungakhawulela kanjani ukungena ku-App Store, iBooks Store, ne-iTunes
Kulokhu okuthunyelwe sizofunda ukuthi singakhawulela kanjani ukufinyelela kuzo zonke izitolo ze-iOS njenge-App Store nge-iOS control yomzali
Konke odinga ukukwazi ngokuthengwa kwangaphakathi nohlelo
Ukuthenga ngaphakathi nohlelo noma ngaphakathi nohlelo kuyaqhubeka ukudala izinkinga kubasebenzisi. Sichaza ukuthi singamisa kanjani yonke into ukuze siyigweme.
Ungalungisa kanjani oxhumana nabo abalahlekile noma abangavumelanisi ne-iCloud ku-iOS 7.1.2
Kungenzeka ukuthi uma ufaka oxhumana naye kuhlelo lwakho lokusebenza loxhumana nabo be-iPhone, akuveli kuhlelo lwakho lokusebenza ledeskithophu. Ake sikuxazulule lokhu.
Ungayisusa kanjani i-Apple ID yakho futhi uhlobanise enye i-akhawunti ye-imeyili nayo
Susa i-akhawunti ye-imeyili ehlotshaniswa ne-Apple ID bese ufaka entsha, ugcine konke okuthengile.
Ungakulawula kanjani ukudlala komculo noSiri
ISiri ikuvumela ukuthi ulawule ukudlala kwesicelo sethu "soMculo" ngemiyalo / nezenzo ezimbalwa ezilula esikutshela zona kwi-iPad News
Ungayishintsha kanjani imibuzo yakho yokuphepha ye-Apple ID
Sikufundisa ukuthi ungayishintsha kanjani imibuzo nezimpendulo ze-akhawunti ye-Apple, okungukuthi, i-ID ye-Apple.
Ungayikhipha kanjani i-Jailbreak Pangu ku-iOS 7.1 naku-7.1.1
IPangu, ukugqashuka kwejele kwe-iOS 7.1 no-7.1.1 okuvela eChina kusimangazile sonke. Sikukhombisa igxathu negxathu ukuthi ungaJailbreak kanjani nePangu.
Ungawasusa kanjani amakhadi esikweletu ku-iCloud Keychain
Sikufundisa ukuthi ungayisusa kanjani idatha yekhadi lesikweletu ku-iCloud Keychain, ukuvimbela imininingwane ukuthi yebiwe noma yikuphi ukuhlupheka okungenzeki.
Ungazibonisa kanjani izithombe namavidiyo ku-Smart TV ngaphandle kwe-Apple TV kusuka ku-iPad yethu nge-iMediaShare
Uma sifuna ukwabelana ngokuqukethwe kwe-iPad yethu ku-TV egumbini lethu lokuphumula futhi sine-Apple TV, singasebenzisa uhlelo iMediaShare
Ungayiphendula Ngokushesha Kanjani Imilayezo Ngaphandle Kokuvula iMessage (Ayikho i-Jailbreak)
Okokufundisa: sichaza ukuthi ungaphendula kanjani ngokushesha kumyalezo ngaphandle kwesidingo sokuvula uhlelo lokusebenza oluhambisanayo
Yini indlela engcono yokwenza iTherhering kusuka ku-iPhone?
Thola indlela engcono yokusebenzisa ifoni yakho njenge-iPhone noma i-iPad bese wabelana nge-Inthanethi nenye idivayisi.
Ungakuthwebula kanjani konke nge-iPhone yakho
Amathiphu wokuthola isithombe esihle kakhulu ezimeni zansuku zonke.
Landa i-ePub yamahhala kumawebhusayithi ahamba phambili
Landa izincwadi ze-ePub MAHHALA bese uzifaka ku-iPad kalula ukuze ukujabulele ukuzifundela usohambweni. Amawebhusayithi azolandwa ePub.
Ungayidlulisa kanjani yonke idatha yakho kusuka ku-Android iye ku-iOS
Kulesi sifundo sizobona isinyathelo ngesinyathelo ukuthi ungayidlulisa kanjani yonke idatha yakho kusuka ku-Android iye ku-iOS. Izithombe, oxhumana nabo, umculo namavidiyo esifundweni esisodwa esilula.
Ungayisebenzisa kanjani i-Control Center uma unekhibhodi ekusikrini ku-iPhone
Kungahle kwenzeke kuwe ukuthi usebenzise i-Control Center uma unekhibhodi esesikrinini, futhi awukwazi ngoba kuthatha yonke into. Namuhla sikukhombisa ukuthi kanjani.
Ungawusebenzisa kanjani umsindo wezaziso zohlelo lokusebenza ku-Facebook lwe-iOS
Namuhla sikutshela ukuthi ungawenza kanjani umsindo wezaziso ze-Push ku-Facebook ye-iOS uma ukhetha ukuba nezwi ngaphezu kwesaziso sokuqhafaza.
Ungawonga kanjani amamephu wokuthintana nawo ungaxhunyiwe ku-inthanethi ngohlelo lokusebenza lweGoogle Maps 3.0
Ukuvuselelwa okusha kweGoogle Maps sekuvele kusivumela ukuthi sikwazi ukugcina amamephu kumadivayisi wethu lapho siwadinga ngaphandle kokuxhumana
Ungazi kanjani ukuthi i-iCloud noma enye insiza ye-Apple iphansi?
Uma ungakwazi ukuxhuma kuhlelo lokusebenza lwe-Apple njenge-iCloud futhi awunasiqiniseko sokuthi iphansi yini noma uma kukhona okungahambi kahle nge-iPhone yakho, namuhla sichaza ukuthi ungayenza kanjani.
Ungayifaka kanjani i-iPad yethu kwimodi ephephile bese ulungisa amaphutha e-Cydia
Ngabe ufuna ukususa i-tweak elimaze idivayisi yakho futhi awukwazi ukuvula i-iPad? Faka i-Safe Mode bese ususa izinhlelo zokusebenza ozifunayo
Ungakukhubaza kanjani ukudlala okuzenzakalelayo kwamavidiyo ku-Facebook kwe-iPhone ngaphansi kwe-3G noma i-LTE
Umhlahlandlela wokwenza kungasebenzi ukudlala okuzenzakalelayo kwamavidiyo kuhlelo lokusebenza lwe-Facebook lwe-iPhone ne-iPad, konga amanani ebhethri nedatha.
Ungayenza kanjani i-iPad yakho ngokushesha ngaphandle kwe-jailbreak
Uma ungathandi ukwephula i-iPad yakho ngejele, nanka amanye amaqhinga okusheshisa idivayisi yakho ngaphandle kokuqhekeka kwejele.
[Okokufundisa] Ungayibuyisa kanjani idatha esusiwe kudivayisi yakho ye-iOS
Kwenzeka kithi sonke ukuthi njalo lapho sisusa into ebesingayifuni, namhlanje sizokhuluma ngohlelo lokuthola idatha esusiwe ku-iOS.
Ama-AnyTones, dala ukuncenceza kwakho kusuka ku-iPhone yakho (i-Cydia)
I-AnyTone uhlelo olusha olutholakala ku-Cydia olukuvumela ukuthi udale ukuncenceza kwakho kusuka ku-iPhone yakho.
Dala amafolda ngaphakathi kwamafolda ku-iOS 7.1 (Okokufundisa)
I-bug etholwe ku-iOS 7.1 nezinguqulo zangaphambilini ze-iOS 7 isivumela ukuthi sifake amafolda ngaphakathi kwamafolda.
Ungahlola kanjani ukuthenga okwenziwe nge-ID yakho ye-Apple ku-iTunes
Ngalesi sifundo esincane sizokufundisa ukwazi umlando wokuthenga okwenziwe nge-ID yakho ye-Apple kusuka kwikhompyutha yakho ene-iTunes
Umhlahlandlela Ocacile weSikhungo Sezaziso
Isikhungo Sokwazisa se-iOS siyinto ewusizo kakhulu uma wazi ukuthi ungayisebenzisa kanjani futhi kulo mhlahlandlela sizokufundisa ukuthi ungazuza kanjani kakhulu kuso.
Okokufundisa: Ungayisusa kanjani i-geolocation yezithombe zethu ku-iPhone
Isinyathelo ngesinyathelo sichaza ukuthi ungayisusa kanjani indawo ekhonjiswe ezithombeni zethu ku-iPhone
Thuthukisa ukusebenza kwebhethri lakho ku-iOS 7.1
Sikukhombisa amaqhinga amancane okukhama ibhethri lethu liye phezulu ku-iOS 7.1
Sombulula inkinga ye-geolocation ehlala ikhona ku-iOS 7.1
IOS 7.1 iza nenkinga maqondana nesikhombi sendawo, njengoba isithonjana siqhubeka ngokuqhubekayo. Sikufundisa ukuthi ungayilungisa kanjani.
Ungayiphatha kanjani i-iPhone ngokuthinta kwekhanda
Umhlahlandlela wokulawula i-iPhone ngokwenza ukuthinta ngekhanda, enye yamaqhinga amahle we-iOS 7.
Izinyathelo okufanele uzithathe ukuze ugweme ukulahlekelwa yi-jailbreak
Izeluleko ezintathu ezilula zokulungisa izimbungulu ezingenzeka futhi ungalahlekelwa yi-iOS 7 Jailbreak
Ungayisetha kanjani iphasikhodi eyinkimbinkimbi ku-iPhone yakho
Namuhla ku-Actualidad iPhone sikhuluma futhi ngezifundiswa futhi sikukhombisa igxathu negxathu ukuze ukwazi ukumisa iphasikhodi eyinkimbinkimbi ku-iPhone yakho
Amaphrofayli wokuhlela we-iPhone yakho
Amaphrofayli wokumisa ahlinzeka abaphathi bohlelo ngendlela esheshayo yokumisa i-iPhone ukuze isebenze nezinhlelo zolwazi zanoma yiliphi ibhizinisi, isikole, noma inhlangano.
Ungasishintsha kanjani isidlaliso seGame Center ku-iOS 7
Isikhungo Segeyimu yinethiwekhi encane yokuxhumana nabantu yemidlalo i-Apple eyenza itholakale kubasebenzisi. Kepha igama lomsebenzisi lingashintshwa? Kunjalo!
Okokufundisa: Ungayidlulisa kanjani iMemos Yakho Yezwi isuka ku-iPhone iye kwikhompyutha
Sichaza ukuthi ungagcina kanjani amamemo wezwi we-iPhone kwikhompyutha yakho
Ingabe unezinkinga zebhethri ku-iOS 7.0.6? Nasi isixazululo esingaba khona
I-iOS 7.0.6 ilethe nesiphazamisi esingaba khona esenza ukuthi idle ibhethri eliningi futhi ihlupheke ngokushisa okukhulu, kepha lesi yisixazululo esikhona.
Indlela Jailbreak iOS 7.0.6 Isinyathelo ngesinyathelo nge Evasi0n
Sichaza igxathu negxathu ukuthi ungayiguqula kanjani i-Evasi0n ukuze ihambisane ne-iOS 7.0.6, futhi sinikeza ngezixhumanisi zokulanda zohlelo olusuvele lushintshiwe
Manje usungaqalisa ukuqinisekiswa kwezinyathelo ezimbili kwe-Apple eSpain. Sichaza konke kuwe.
Uhlelo lwezokuphepha lwe-Apple "lokuqinisa izinyathelo ezimbili" seluyatholakala eSpain. Sichaza ukuthi kuyini nokuthi singayilungiselela kanjani.
Ungayithola kanjani kabusha i-iPhone elahlekile noma eyebiwe, i-iPad noma iMac.
Ukuthola i-iPhone yakho, i-iPad ne-iPhone elahlekile noma eyebiwe kungenzeka ngenxa yenketho ethi "Thola i-iPhone yami"
Uma inkinobho yasekhaya noma inkinobho yamandla ku-iPad yakho ingasebenzi futhi ufuna ukuthatha izithombe-skrini, ungasebenzisa ithuluzi le-iOS: AssistiveTouch
I-iPhone yami ayiphenduli noma ivuleke
Uma i-iPhone yakho ingaphenduli, ungakhathazeki, ngaphambi kokuyiyisa ku-Apple kunezinqubo eziningi ongazama ukuzilungisela inkinga ngokwakho, ngiyethemba kuyasiza.
I-WhatsApp ku-iOS 7: ungasifihla kanjani isikhathi sokuxhuma kokugcina
Siyaqhubeka nokukhuluma ngamaqhinga kubhulogi yethu futhi kulokhu sizokutshela ukuthi ungasifihla kanjani isikhathi sokuxhumeka kokugcina ku-WhatsApp ye-iOS 7
Ungawahumusha kanjani amamenyu akho e-Pebble abe yi-Spanish
Sikukhombisa ukuthi uwahumushela kanjani amamenyu oGugu lwethu ku-Spanish sibonga kweminye imishini eguquliwe.
Indlela Export iPhone Oxhumana Ukusebenzisa iCloud
Uma uzoshintsha i-terminal yakho ephathekayo, noma ufuna ukuthatha oxhumana nabo be-iPhone baye ocingweni lwesibili, namuhla sizokutshela ukuthi ungakwenza kanjani igxathu negxathu nge-iCloud.
Ungayithola kanjani inkumbulo ku-iPhone yakho ngokususa izinsalela zohlelo lokusebenza
Esigabeni sethu sezifundo ze-iPhone sikufundisa ukusebenzisa insiza ethokozisayo yamakhompyutha ongabuyisa ngayo inkumbulo ngokuqeda imfucuza
Okuphezulu okungu-10 kokuthinta okuwusizo kakhulu ku-iOS
Okunye ukuthinta okuwusizo kakhulu esingakwengeza emsebenzini wethu ne-iPhone futhi okusheshisa kakhulu ukuhamba kwethu phakathi kwezinhlelo ezahlukahlukene.
Ungazikhipha kanjani izinombolo kusuka ku-iPhone lock screen nge-SimplePasscodeButtons (Cydia)
Uma ungafuni ukuthi izinombolo noma izinhlamvu zibonakale kwikhibhodi ebonakalayo ye-iPhone, kufanele ulandele lesi sifundo esilula se-SimplePasscodeButtons tweak
Ungazenza kanjani izinhlelo zokusebenza zingabonakali ku-iPhone ngaphandle kwe-jailbreak
Uma uhlale ufuna ukulahlekelwa uhlelo lokusebenza ku-iPhone, qaphela, ngoba namuhla sikutshela ukuthi ungazenza kanjani izinhlelo zokusebenza zingabonakali ku-iPhone ngaphandle kwe-jailbreak.
Ungangeza kanjani izichazamazwi ezintsha ku-iOS 7
Sikukhombisa iqhinga elilula lokuthi ungangeza kanjani izichazamazwi ku-iOS 7 ongaxazulula ngayo ukungabaza kwakho ngezilimi nezincazelo ngeSpanishi.
Ungashintsha kanjani ibhethri le-iPhone 5
Uma ubheja kuzenzele ngokwakho uma kukhulunywa ngokushintsha ibhethri le-iPhone 5 yakho nokonga imali, sikukhombisa isifundo ngesinyathelo ngesinyathelo sokuthi ungakwenza kanjani.
Isifundo seCydia: funda ukuthi ungasiphatha kanjani isitolo seJailbreak
Sikunikeza isifundo ku-Cydia, ngezithombe-skrini kanye nevidiyo echazayo ongabona kuyo izici zayo eziyinhloko nemisebenzi.
Sebenzisa isilawuli sakho se-PS3 njengesilawuli se-iPad yakho noma i-iPhone
Uma sinesilawuli se-PS3 asisenaso isithiyo sokukwazi ukujabulela imidlalo ehambisana nabalawuli be-MFI ku-iPad yethu noma ku-iPhone
Okokufundisa: dlala nomlawuli we-PS3 ne-iPhone yakho noma i-iPad (Jailbreak)
Ukudlala imidlalo oyikhonzile ku-iPhone yakho naku-iPad ngesilawuli sePS3 manje sekuyinto yangempela. Sichaza ukuthi sikwenze kanjani.
Ingabe i-iOS 7 yehluleka wena kaningi? Thola imbangela yokuphahlazeka ngaleli qhinga
Ukukhohlisa ukuthola nokuxazulula ukwehluleka ku-iOS 7 okwenza i-iPhone, i-iPad noma i-iPod Touch ilenge noma iqale kabusha
Ungafaka kanjani kabusha amakhosombe asuswe ngephutha eCydia
Ukufaka amakhosombe asuswe ngephutha kulula futhi kungenziwa kusuka kuCydia ngezinyathelo ezintathu ezilula.
Ungabelana kanjani oxhumana nabo kusuka kukhalenda lakho namanothi ngokusebenzisa iMessage
Ukuhlanganiswa kohlelo lokuthumela imiyalezo lwe-iOS, iMessages, kukuvumela ukuthi uthumele oxhumana nabo abavela ku-ajenda yakho ngokuchofoza okumbalwa kunoma ngubani ofuna
Ungawavala kanjani wonke amathebhu weSafari ngasikhathi sinye ku-iOS 7
Khohlisa ukuvala wonke amathebhu esiwavule eSafari ye-iOS 7 ngasikhathi sinye, ngaphandle kwe-jailbreak nangendlela elula kakhulu ngenxa yalesi sifundo.
Ungawakha kanjani ukuncenceza kwe-iPhone ngeGarageBand
Ukuba nemiculo ye-iPhone akulula, kepha namuhla ungafunda ukuthi ungakha kanjani ukuncenceza kwe-iPhone ngeGarageBand ngendlela elula
Ungakuvula kanjani ukuthinta okusizayo ku-iPhone
Funda ukuthi ungayisebenzisa kanjani i-Assistive Touch ku-iPhone ukungeza inkinobho yokuthinta e-Home ku-iPhone yakho nakwezinye izinqamuleli ngaphandle kokusebenzisa inkinobho yasekhaya
Ungayiguqula kanjani ithoni yomyalezo we-WhatsApp ukuze uyilandele (i-Jailbreak)
Sikukhombisa ukuthi uwafaka kanjani amathoni omlayezo wangokwezifiso ku-WhatsApp sibonga i-Jailbreak
Ungazivumelanisa kanjani izinqamuleli zekhibhodi kusuka ku-iOS 7 naku-OS X Mavericks?
Izinqamuleli zekhibhodi ze-iOS ne-OS X Mavericks zingavunyelaniswa; Ngakho-ke, uma sinesinqamuleli ku-iPad sizoba nayo naku-Mac yethu
Ungathola kanjani ukuthi ngabe i-akhawunti yakho ye-Snapchat isigenciwe
Sikutshela izinyathelo okufanele uzilandele ukuthola ukuthi i-akhawunti yakho ye-Snapchat ingene yini ngobugebengu
I-Seas0nPass ikuvumela ukuthi usebenzise i-Apple TV 5.3
I-Seas0nPass iyithuluzi lokuthi ngokuvuselelwa kwalo okusha, likuvumela ukuthi ungene ejele i-Apple TV 5.3, ngaphandle kwesizukulwane sesithathu.
Ungalibona kanjani igama eligcwele lomamukeli ku-iMessage
Kulokhu okuthunyelwe sizofunda ukuthi sibeka kanjani igama eligcwele lomamukeli we-iMessage ngaphezu kwengxoxo yabo.
Lungiselela i-iPad ukuze ukwazi ukuyishiyela abancane
Ukusetha i-iPad ukuze sikwazi ukuyishiyela izingane zethu kulula kakhulu. Okufanele sikhathazeke kakhulu ngakho ukukuvikela ekungenelweni amathe, kuphonsa ...
Ukulungiswa kweselula, isisombululo sesikhashana se-Mobile Substrate
Isixazululo esisha senkinga ye-Mobile Substrate nge-Evasi0n 7 manje sesiyatholakala kuze kuphume isibuyekezo esisemthethweni
Ungazisebenzisa kanjani izicelo zeCydia
Ngoba i-Mobile Substrate ayikahambisani ne-Evasi0n 7, izinhlelo zokusebenza zeCydia esizifakayo kwesinye isikhathi ziyayeka ukusebenza. Sichaza ukuthi singayixazulula kanjani.
Shintsha ilogo ye-opharetha nge-Zeppelin (Cydia)
I-Zeppelin isisiza ukuthi sishintshe i-logo ye-opharetha ye-iPhone yethu kalula
I-P0sixspwn ivuselelwa ukulungisa izimbungulu nge-Untethered ye-iOS 6.1.3 ne-6.1.5
I-p0sixspwn, iphakethe le-Cydia elikuvumela ukuthi uguqule i-Jailbreak yakho kusuka ku-tethered kuya ku-untethered, ibuyekezelwe enguqulweni ezinzile ngaphandle kwezimbungulu.
Isixazululo sokuvimba i-iPad yakho ngophawu lokuqalisa lapho kubanjwa ijele nge-Evasi0n 7
Sikunikeza ezinye izixazululo zokuvimbela i-iPhone noma i-iPad ngemuva kokuzama ukwenza i-jailbreak, ilogo yokuqala ilungiswe esikrinini
Guqula i-Tethered Jailbreak kusuka ku-iOS 6.1.3 no-6.1.5 iye ku -etheethered nge-p0sixspwn
Manje usungadlulisa i-Tethered Jailbreak kusuka ku-iOS 6.1.3 no-6.1.5 uye kwi-Untethered ngokufaka iphakheji etholakala kwaCydia, p0sixspwn
Indlela Jailbreak iOS 7 nge Evasi0n
Sichaza igxathu negxathu ukuthi ungakwenza kanjani i-Jailbreak iOS 7, kokubili ku-Mac naku-Windows, sibonga i-Evasi0n7
Izinkinga zokuqala nge-iOS 7 Jailbreak
Izinkinga zokuqala nge-iOS 7 Jailbreak ziqala ukuvela.Yiziphi izixazululo? Siyakubachazela
I-Evasi0n ye-iOS 7 isiyatholakala. Isifundo sendlela yeJailbreak.
I-Evasi0n ye-iOS 7 iphumile manje. Sikukhombisa igxathu negxathu ukuthi ungayibulala kanjani i-Jailbreak idivayisi yethu.
I-ID yakho ye-Touch ayisebenzi kahle? Zama lesi sixazululo
Isifundo esifushane sezinyathelo okufanele uzithathe ukuze i-ID yethu yokuthinta ithole kahle iminwe yethu ukuze ivule idivayisi esetshenzisiwe.
Icebo: Ungakushintsha kanjani ukubukeka kwamawashi aphesheya ku-iOS 7
Sikutshela ukuthi ungakushintsha kanjani ukubukeka kwamawashi aphesheya ku-iOS 7
Okokufundisa: Ungavimba kanjani amakhasi ku-Safari
Sichaza ukuthi uvimba kanjani amakhasi e-web ku-Safari ukuze kungabikho msebenzisi angawavakashela
Ungazipha kanjani izinhlelo zokusebenza kusuka ku-App Store
Sichaza igxathu negxathu ukuthi singazinikeza kanjani izicelo kwabanye abantu, inketho enhle kulo Khisimusi
Ungayigcina kanjani idatha kusilinganiso sakho ukuze ihlale inyanga yonke
Amacebo okusindisa idatha ngesilinganiso sakho ukuze ihlale inyanga yonke.
Zonke izenzo ezingenziwa kusetshenziswa ukuthinta ku-iOS 7
IOS 7 inokuthinta okuningi kokwenza izinto ezahlukahlukene futhi namhlanje sizokukhombisa ngamunye wabo
Uwadlala kanjani amavidiyo ku-iPad yakho kusuka kuseva ye-UPnP
Ukudala iseva ye-UPnP nokujabulela okuqukethwe kwe-multimedia ku-iPad yakho kulula kakhulu futhi ungakwenza mahhala.
Ungaguqula kanjani usayizi wefonti ku-iOS 7?
Kulesi sihloko, sizokufundisa ukuthi ungaguqula kanjani usayizi wefonti we-iOS 7 ku-iPad yethu usebenzisa izilungiselelo nokufinyeleleka
Ungawavula kanjani amafayela we-ePub kuma-iBooks ngaphandle kokusebenzisa i-iTunes?
Kulesi sifundo sizokufundisa ukuthi uwavula kanjani amafayela we-ePub ngaphandle kokusebenzisa i-iTunes usebenzisa i-imeyili yakho
Ungayifinyelela kanjani imenenja yokwenza imisebenzi eminingi ngokushesha
Inketho esheshayo yokufinyelela i-iOS multitasking ukuswayipha iminwe emine noma emihlanu kusikrini se-iPAd esikhundleni sokusebenzisa iKhaya.
Ngiyigcina kanjani i-iPad yami iphephile?: Amakhodi ekhodi namaphasiwedi
I-IPad ingaqukatha imininingwane ebucayi engabonwa yiwo wonke umuntu. Uma ufuna ukufunda ukuthi ungafaka kanjani iphasiwedi ku-iPad yakho le yiwebhusayithi yakho
Ungayenza kanjani i-iOS 7 ifunde izincwadi zethu ngokuzenzakalela: i-VoiceOver
I-VoiceOver iyisici esiyisisekelo se-iOS 7 esivumela ukuthi sisebenzise kancane i-iPad ukufunda izincwadi, ngokwesibonelo.
Amaqhinga: Izinqamuleli zekhibhodi ku-iOS 7
IOS 7 ingeza izinqamuleli kumakhibhodi angenantambo
Izinqamuleli zekhibhodi ze-iPhone ne-iPad
IOS ivumela izinqamuleli zekhibhodi ukuthi zisetshenziswe nganoma iyiphi imodeli yekhibhodi ye-Bluetooth ehambisanayo
Okokufundisa: Ungawagcina Kanjani Amakhadi Esikweletu ku-iPhone ane-iCloud Keychain
Sichaza ukuthi uwagcina kanjani amakhadi esikweletu ku-iPhone nge-iCloud Keychain
Okokufundisa: Ungakulawula kanjani ukusetshenziswa kwedatha yethu yanyanga zonke nge-FaceTime nezinye izinhlelo zokusebenza
Sichaza ukuthi singakulawula kanjani ukusetshenziswa kwedatha nyangazonke nge-FaceTime nezinye izinhlelo zokusebenza
Manje yebo, uSiri ufunda ama-imeyili akho
Nge-iOS 7 sithole ukuthuthuka okumbalwa. Omunye wabo nguSiri, ongasiyona inguqulo ye-beta, ezosebenza ngokuphelele.
Amaqhinga amahlanu wokuthola okuningi ku-BlackBerry Messenger ye-iPhone
Amaqhinga amancane amahlanu awusizo okusisiza ukuthi sithole okuningi ku-BlackBerry Messenger, uhlelo lokusebenza lwemiyalezo olusheshayo lwe-BlackBerry lwe-iPhone
Ungabuka kanjani okhiye abalondolozwe ku-iCloud Keychain kusuka ku-iOS 7
Imininingwane egcinwe ku-iCloud Keychain iyatholakala ku-iOS 7. Sikukhombisa ukuthi ungabonisana kanjani nokuthi uyihlele kanjani.
Awuthandi umphumela we-Blur ku-iOS 7? Ungawukhubaza futhi
Ungayikhubaza kanjani imiphumela yokufiphala noma umphumela obala we-iOS 7 esikhungweni sokulawula nesikhungo sezaziso.
Izeluleko eziyisikhombisa zokuthatha izithombe ezingcono ze-landscape kusuka ku-iPhone yakho
Sikulethela umhlahlandlela omncane futhi olula wokuthatha izithombe zamathafa ngendlela efanelekile kusuka ku-iPhone yethu.
Ungayisetha kanjani i-iCloud Keychain kudivayisi yakho
Umsebenzi we-iCloud Keychain ukuvumela ukuthi ufinyelele okhiye bakho kunoma iyiphi idivayisi, sichaza ukuthi ungayilungisa kanjani
Ukukhohlisa: Ungakuyeka kanjani ukudlala umculo ku-iPhone yakho lapho uyolala
Icebo elincane le-iOS: sikutshela ukuthi uyeke kanjani ukudlala umculo ku-iPhone yakho lapho uyolala
Ungayakha kanjani imicimbi yekhalenda kusuka kwi-iMessages noma Imeyili?
Futhi ku-iPad News sikukhombisa okokufundisa okuhlobene ne-iOS 7: ungawenza kanjani umcimbi kukhalenda ngenkathi ungaphandle kohlelo lokusebenza.
Sebenzisa izichazamazwi ze-iOS 7
Kulesi sihloko sizochaza ukuthi ungazifaka kanjani izichazamazwi ze-iOS 7, nokuthi zisebenza kanjani.
Ungasiphatha kanjani isipele se-iCloud
Sikhombisa ukuthi singasilungisa kanjani isipele se-iCloud, ukuphatha kangcono isitoreji sethu
Amaqhinga amane we-iOS 7 Ongase Ungazi Ngawo
Sikhombisa amaqhinga amane we-iOS 7 okungenzeka awazi namanje
Isimo sezulu asiveli esikhungweni sezaziso se-iOS 7? Yenza kusebenze amasevisi endawo
Uma isibikezelo sezulu singaveli esikhungweni sezaziso se-iOS 7, kufanele wenze kusebenze amasevisi endawo.
Amathiphu okuphatha isitoreji ku-iPhone yakho
Sikushiyela ezinye iziphakamiso zokuphathwa okungcono kwesitoreji sangaphakathi sedivayisi yethu esiyithandayo ye-iOS.
Ungayisula kanjani i-iTunes Store cache kwikhompyutha yakho
Ezimweni eziningi, izitolo ze-iTunes ezisetshenziswa kusuka kukhompyutha azivuselelwa. Uma sifuna ukuthi zivuselelwe, kuzofanele sikhiphe isilondolozi.
Shintsha ikhadi lesikweletu elihlotshaniswa ne-akhawunti yakho ye-Apple
Ukushintsha ikhadi lesikweletu noma lasebhange elihambisana ne-akhawunti yakho ye-Apple kulula kakhulu. Sichaza izinyathelo ngokuningiliziwe.
Ukukhohlisa ku-iOS 7: sebenzisa inkinobho .com, .es nabanye ku-Safari
IOS 7 iqhinga lokwenza inkinobho ye-.com ivele ku-Safari
Izinqamuleli zekhibhodi ku-iOS 7
Ngokufika kwe-iOS entsha, i-Apple ivuselele ikhibhodi ebonakalayo. Kulokhu okuthunyelwe uzothola izinqamuleli eziningana ekusebenzeni kwekhibhodi ku-iOS 7.
Ungazilungisa kanjani izingqinamba zokusebenza kwekhibhodi ku-iOS 7?
Kwamanye amadivayisi, ikhibhodi ye-iOS 7 ilenga kakhulu ngenxa yezinkinga zangaphakathi esingazilungisa ngokubuyisela izilungiselelo ze-iOS.
IOS 7 ikuvumela ukuthi uvule amafayela acindezelwe ngefomethi ye '.zip'
Isici esisha se-iOS 7 sisivumela ukuthi sivule amafayela acindezelwe ku-.zip
Ungangeza kanjani ukwesekwa kwendawo yesikhathi kukhalenda?
Kulesi sihloko ngifuna ukukukhombisa ukuthi ungafaka kanjani ukuxhaswa kwendawo yesikhathi ekhalendeni ledivayisi yethu ukugwema izinkinga lapho sihamba.
Ungakhawulela kanjani ukufinyelela kwe-inthanethi ku-iPad yakho, i-iPhone kanye nekhompyutha
Ngenxa yemizila ye-Apple ungakhawulela ukufinyelela kwe-inthanethi kumadivayisi asekhaya, uwakhawulele emahoreni athile.
Amaqhinga ama-5 alula wokuthuthukisa i-iOS 7
Thuthukisa ulwazi ku-iOS 7 ngalezi zindlela ezi-5 ezilula ezizothuthukisa ukufinyeleleka kwedivayisi kanye nokuhlangenwe nakho kwayo kokugcina.
Ungazifaka Kanjani Iziteshi ku-iTunes Radio
ITunes Radio ikuvumela ukuthi ungeze iziteshi esikrinini esikhulu sohlelo lokusebenza. Sichaza ukuthi sikwenze kanjani.
Setha ibhokisi lokungenayo le-imeyili le-iOS
IOS 7 Mail isinikeza izinketho eziningi. Sikukhombisa ukuthi ungalimisa kanjani ibhokisi lokungenayo ngamafolda wangokwezifiso.
Ukuxazulula inkinga iMessage ku-iOS 7 (Okokufundisa)
Sethula lesi sifundo esincane ukuxazulula izinkinga ze-iMessage kumadivayisi wethu nge-iOS 7 ebanikeze iphutha lapho ubathumela noma ubamukela.
Ungayicisha kanjani i-Find My iPhone Activation Lock
Ukuphepha okusha kwe-Find My iPhone kuvimbela ukubuyisa idivayisi ngaphandle kobunikazi bomnikazi wayo wangaphambilini. Sichaza izinyathelo okufanele sizithathe ukuyixazulula
Ungayisusa kanjani imilayezo ku-iOS 7
I-iOS 7 entsha iguqule indlela yendabuko ebesazi ngayo ukususa imiyalezo. Isithonjana sokuhlela sithathelwe indawo isenzo sokuswayipha.
Susa ukubonakala kanye nomphumela we-parallax ukuze uthuthukise ukusebenza
I-Apple ikuvumela ukuthi ususe okusobala nomphumela weParallax kusuka ku-iOS 7, ukuthuthukisa ukusebenza kwedivayisi nokunciphisa ukusetshenziswa kwebhethri.
Ungakhubaza kanjani ukufinyelela esikhungweni sezaziso nendawo yokulawula esikrinini sokukhiya
Ungakhubaza kanjani ukufinyelela esikhungweni sezaziso se-iOS 7 nendawo yokulawula kusuka kusikrini sokukhiya.
Okokufundisa: Ungawakhiphela kanjani amavidiyo wamaSlow Motion kuma-iPhone 5s
Sichaza ukuthi ungathumela kanjani amavidiyo woqobo ngokuhamba kancane kuma-iPhone 5s
Ungaziguqula kanjani izinhlamvu ze-iOS 7
Sikutshela ukuthi ungayiguqula kanjani ifonti ye-iOS 7 ukuze ifundeke kalula
Ungawakha kanjani amafolda ngaphandle kwegama futhi ngaphandle kwesidingo se-jailbreak
Siyazi ukuthi ngokwakha amafolda anezinhlelo zokusebenza ezithile ngaphakathi singenza ukuthi angasiceli ukuthi siwanikeze igama.